ကိုယ့်အကြောင်း မကောင်းပြောတဲ့ သူများနဲ့တွေ့အခါမှာ » Today Bago
HomeGeneral Knowledgeကိုယ့်အကြောင်း မကောင်းပြောတဲ့ သူများနဲ့တွေ့အခါမှာ ကိုယ့်အကြောင်း မကောင်းပြောတဲ့ သူများနဲ့တွေ့အခါမှာ February 7, 20160comments OMCTC Posted in General Knowledge0၁) သူတို့ကို ရန်သွားပြီး မတွေ့ပါနဲ့
ကိုယ့်အကြောင်း မကောင်းပြောတဲ့ သူများနဲ့ တွေ့ရင် သူတို့ကို ရန်သွားမလုပ်ပါနဲ့။ သူတို့ ပြောချင်ရာ ပြောပါစေ။ ခဏမေ့ထားလိုက်ပါ။
၂) သူတို့အပေါ် ကောင်းစွာဆက်ဆံလိုက်ပါ
ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းပြောတဲ့ သူတွေကို ကောင်းမွန်စွာ ဆက်ဆံလိုက်ပါ။ သူတို့ မကောင်းသော်လည်း ကိုယ်ကောင်းအောင် နေပြလိုက်ပါ။
၃) သူတို့ကို တွေ့တိုင်း ပြုံးပြလိုက်ပါ
အပြုံးဟာ အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ မဲ့ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကြည့်လည်း ကိုယ့်ဘက်က ပြုံးရွှင်စွာ ကြည့်လိုက်ပါ။
မေတ္တာ ဓာတ်ဟာ ရောင်ပြန်ဟပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်အပေါ်မှာ မကောင်းတဲ့ သူများကို မေတ္တာရှေ့ထားဆက်ဆံပါ။ ကျန်းမာ ချမ်းသာ ပါစကြောင်း
ကိုယျ့အကွောငျး မကောငျးပွောတဲ့ သူမြားနဲ့တှအေ့ခါမှာ
၁) သူတို့ကို ရနျသှားပွီး မတှပေ့ါနဲ့
ကိုယျ့အကွောငျး မကောငျးပွောတဲ့ သူမြားနဲ့ တှရေ့ငျ သူတို့ကို ရနျသှားမလုပျပါနဲ့။ သူတို့ ပွောခငျြရာ ပွောပါစေ။ ခဏမထေ့ားလိုကျပါ။
၂) သူတို့အပျေါ ကောငျးစှာဆကျဆံလိုကျပါ
ကိုယျ့အပျေါ မကောငျးပွောတဲ့ သူတှကေို ကောငျးမှနျစှာ ဆကျဆံလိုကျပါ။ သူတို့ မကောငျးသျောလညျး ကိုယျကောငျးအောငျ နပွေလိုကျပါ။
၃) သူတို့ကို တှတေို့ငျး ပွုံးပွလိုကျပါ
အပွုံးဟာ အရေးကွီးပါတယျ။ သူတို့ မဲ့ပွီး ကိုယျ့ကိုယျကွညျ့လညျး ကိုယျ့ဘကျက ပွုံးရှငျစှာ ကွညျ့လိုကျပါ။
မတ်ေတာ ဓာတျဟာ ရောငျပွနျဟပျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကိုယျ့အပျေါမှာ မကောငျးတဲ့ သူမြားကို မတ်ေတာရှထေ့ားဆကျဆံပါ။ ကနျြးမာ ခမျြးသာ ပါစကွောငျး
Related Posts0comments General KnowledgeLifestyle ကွန်ဖြူးရှပ် ပြောတဲ့ ဘ၀ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ သင်ခန်းစာ(၁၀)ခု
0 comments General Knowledge လူငယ်တွေကို ဒီကျောင်းတက်စေချင်မိတယ်….
0 comments General Knowledge ​(၄) ဘာသာဂုဏ်ထူးပါပြီး (၁)ဘာသာကျရှုံးရတဲ့အဖြစ်
ပိန်သွယ်သူတို့ ကိုယ်အလေးချိန် တက်လာစေမည့် မှန်ကန်ေ...	February 7, 2016	0 comments ﻿ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ရဖို့ သုံးသင့်တဲ့ နည်းပရိယာ...	February 7, 2016	0 comments Share this 0SHARESFacebookTwitterGooglePinterestRedditTumblr
0 comments Unique Things အမလေး ! သူ့အစား အသည်းယားလိုက်တာနော်
Do not miss0comments General KnowledgeLifestyle ကွန်ဖြူးရှပ် ပြောတဲ့ ဘ၀ကိုပြောင်းလဲနေတဲ့ သင်ခန်းစာ(၁၀)ခု